अहिलेकै जनशक्तिले स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी गर्न समस्या छ
फागुन २०, २०७४ आइतवार १८:००:०० प्रकाशित
स्थानीय तहसँग काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
पक्कै पनि पहिलाको तुलनामा अहिले निकै फरक अनुभव भइरहेको छ । अहिले काम गर्न अलि अप्ठेरो छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको पनि नयाँ अनुभव भएकाले असहजता दुवैतिर छ जस्तो लाग्छ । पहिले स्वास्थ्यका हरेक कार्यक्रम त्यसै अनुसारका विज्ञको संयोजकत्वमा गरिने भएकाले धेरै अप्ठेरो अनुभव थिएन । अहिले ती सबैजसो काम स्थानीय तहमा खटिएका स्वास्थ्य संयोजकले गर्नुपर्ने भएकोले हामीलाई अलि अलमल भइरहेको अवस्था छ।
कस्तो खालको अप्ठेरो अनुभव भन्न खोज्नुभएको हो ?
केन्द्र र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिका भिन्न भएकैले हामीलाई चुनौती छ । त्यसले गर्दा हामीलाई सुरुमा निकै अलमल भयो । तर यसो भनिरहदाँ काम गर्न निकै नै गाह्रो भन्ने त लागेको छैन । शैलीमा भिन्नता भएपनि स्थानीय सरकारले निर्णय गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सहज छ भने अर्कोतिर नयाँ परिवेशमा काम गर्नुपरेकाले कहिले आर्थिक ऐनका कुरा, कहिले निर्देशिकामा भएको कुरामा अलमल हुने, प्रष्ट हुन नसकिने जस्ता कुराले समस्या भएको भने पक्कै छ । त्यस्तो अप्ठेरोमा हामीले विज्ञसँग सल्लाह–परामर्श लिई काम गरिरहेका छौँ । काममा सहजता हुदैँ आएको अनुभव गरिरहेको छु।
खजुरा गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कत्तिको महत्व दिइएको छ ?
खजुरा गाउँपालिकाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपनि वर्षको दुईपटक स्वास्थ्य शिविर राख्ने, समयमै औषधि खरीद गर्ने, सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रमलगायतका प्रमुख कार्यक्रम, औषधि खरीद लगायतका कार्यक्रमलाई महत्व दिएर कार्यक्रम सहज रुपमा चलिरहेको अवस्था छ । खजुरा गाउँपालिकाले कुल बजेटको ४ दशमलव ७ प्रतिशत रकम स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरेको छ।
समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा धेरै स्थानीय तहमा औषधि खरीद, सुरक्षित मातृत्वलगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । खजुरा गाउँपालिकाको स्थिति कस्तो छ?
अन्य गाउँपालिकाको अवस्थाबारे मलाई जानकारी भएन । खजुरा गाउँपालिकामा भने यस्तो अवस्था छैन । मलाई लाग्छ बाँकेमा सुरुमा न्यानो झोला खरीद गरेर वितरण गर्ने हामी नै होला । औषधि खरीदमा पनि समस्या आएन । अन्य कार्यक्रमका लागि पनि खासै अप्ठेरो भएको छैन । औषधि अभाव हुन नदिन लेखाले पनि सहयोग गर्छ । साढे सोह्र लाखको बजेटमा औषधि खरीद गरेर प्रत्येक वडामा वितरण गरिसकेका छौँ।
भनेपछि तपाईको गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि थप व्यवस्थापन वा समस्या नै रहेनछ ?
समस्या नै नभएको भन्ने होइन । अहिलेकै जनशक्तिमा व्यवस्थापनको काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि सकारात्मक बजेट विनियोजन भएपनि पर्याप्त प्राविधिकहरु नहुदाँ समस्या छ । समयमै औषधि खरीद भएपनि त्यसको भण्डारण गर्ने भौतिक संरचना, स्टोरकिपर, तथ्यांक अधिकृतको अभाव पनि उत्तिकै छ । अहिलेकै जनशक्तिले स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी र गुणस्तरीय रुपमा गर्न निकै गाह्रो छ।
अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने कुराहरु छन् ?
हरेक स्थानीय तहमा सिनियर तथा विज्ञलाई संयोजक बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । विषयगत अनुभव भएका विज्ञ हरेक गाउँपालिकामा आवश्यक छ । दुईजनाले मात्र स्वास्थ्यका यतिका धेरे कार्यक्रम गर्न समस्या छ । हरेक पालिकाको स्वास्थ्य शाखा बनाई तथ्यांक अधिकृत, स्टोरकिपर,आवश्यक नर्सिङ स्टाफलगायत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके काम गर्न सहज हुन्थ्यो । पहिले हरेक विषयगत कार्यक्रमअनुसारकै विज्ञको नेतृत्वमा कार्यक्रम हुने गथ्र्यो र त कार्यक्रम गर्न चुनौती हुन्थ्यो अहिले पालिकाका दुई कर्मचारीले मात्र सबै कार्यक्रम गर्न गाह्रो छ ।